Wararkii ugu dambeeyay weerarkii garoonka diyaaradaha Istanbul (Sawirro) – STAR FM SOMALIA
Faah faahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar isugu qaraxyo iyo rasaas xalay lagu qaaday garoonka diyaaradaha Ataturk Air Port ee magaalada Istanbul, iyadoo weerarkan ay ka dambeeyeen illaa saddex ruux oo mid ka mid ah uu ku hubeysnaa qori Ak47.
Baarayaasha Turkiga ayaa sheegaya in illaa saddex qarax ay ka dhaceen garoonka, iyadoo labo ka mid ah ay ka dhaceen qeybta laga galo Terminalka caalamiga ee garoonka.
Warbaahinta Turkiga ayaa ku warameysa in ciidamada ammaanka ay toogteen labo ka mid ah kooxaha hubeysan oo damacsanaa inay ka gudbaan qeybta baaritaanka la maro ee Scan-ka
Ciidamada iyo qof dabley ku hubeysnaa Ak47 ayaa is weydaarsaday rasaas, iyadoo markii dambe ninka dableyda ay rasaas lugta uga dhacday, kadibna waa uu is qarxiyay.
Dableyda weerartay garoonka ayaa la rumeysan yahay inay ku yimaadeen Taxi, weerarkan ayaa noqonaya kii u horeyay ee lagu qaado garoonka diyaaradaha Istanbul.
Khasaaraha ka dhashay wegraken ayaa isa soo taraya, saraakiisha caafimaadka Turkiga ay sheegaya in illaa 36 ruux ay ku dhimatay weerarka, balse laga cabsi qabo in tirada dhimashada ay gaarto 50-ruux.
Sidoo kale waxaa ku dhaawacmay illaa 150 kale, waxaa gebi ahaanba la xiray garoonka diyaaradaha Istanbul oo ahaa garoonka ugu mashquulka badan garoomada caalamiga ah.
Dad fara badan ayaa laga daad-gureeyay garoonka, kuwaasoo ahaa rakaabkii duulimaadyada ka bixi lahaa garoonka.
Duulimaadkii sida toos ugn imaanayay magaalada Washington ayaa gebi ahaanba la joojiyo, kadib markii uu dhacay weerarka.
Ra’iisul Wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa durbaba waxaa uu weerarka ku eedeeyay inay ka dambeeyaan kooxda ISIS, waxaana uu xusay suurta galnimada inuu jiro qof afaraad oo weerarka ku lug lahaa.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan ayaa isna ku eedeeyay weerarka kooxda ISIS ee fadhigooda yahay Ciraaq iyo Suuriya, waxaana uu ku hanjabay inay sii wadayaan dagaalka ka dhanka ah Argagixisada.
Waxaa la soo sheegayaa in dadka ku dhintay weerarkaas ay ku jiraan dad ajnabi ah, balse wali dhalashadooda lama helin.
Warbaahinta reer galbeedka ayaa durbaba weerarkan ku xiriirineysa Tartanka Ciyaaraha Qaramada Yurub ee ka socda Faransiiska oo shirkada Turkish Airlines ay ka qeyb qaadaneyso fududeynta tartankaas.
Ma jirto illaa iyo hada koox sheegatay weerarkan, balse waxaa horay Turkiga weeraro qaraxyo uga geystay kooxda la mamnuucay ee PKK iyo ISIS.